कोल्टे फेरिएको राजनीति - NA MediaNA Mediaकोल्टे फेरिएको राजनीति - NA Media
यतिबेला राजनीति कोल्टे फेरिएको छ । सत्तामा भएकाहरूलाई सत्तामा हुनुको कुनै स्वाद छैन, उता सडकमा भएकाहरूलाई भोलि नै सत्ताधारी होइने लालसाले गाँजेको छ । आन्तरिक रूपमा राजनीति कोल्टे फेरेको फे¥यै छ । यो केवल घरेलु राजनीतिको मात्रै पटकथा हैन । विश्व राजनीतिको सामान्य बाछिटा हो । यसै विषयमा समसामयिक राजनीतिको संक्षिप्त आकलन गर्ने यो आलेखको ध्येय रहेको छ । अमेरिकामा ४६ राष्ट्रपतिमध्ये जम्मा तेह्रजनाले बाहेक दोस्रो अवधिमा पराजय भोगी एक अवधिमा नै ह्वाइट हाउसको दरबार छोड्न प¥यो । उता भ्लादिमिर पुटिन भने सन् १९९९ देखि अकण्टक सत्ताको शिखरमा आसीन हुनुहुन्छ । र अझै दुई कार्यकालका लागि कायम रहने लालसा व्यक्त गर्नुभएको छ । उता जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले लगातार दुई दशक लामो सत्ताको नेतृत्व गर्नुभयो । ७० पुग्न लागेका सि जिन पिड झण्डै एक दशकदेखि सर्वोच्च नेताका रूपमा एक दार्शनिकका रूपमा विकासका लागि एक विश्वदृष्टिकोण निर्माताका रूपमा आफूलाई परिचित गराउनुभयो । लामो समय शासनको बागडोर समाल्नेहरूले कुनै न कुनै पहिचान बनाएर आफू र आफ्नो मुलुकलाई विश्वसामु चिनाएका छन् ।
नेपाल शीत युद्धका बेला पनि असंलग्न राष्ट्रका रूपमा आफ्नो छवि बनाएर बस्यो । पछिल्लो चरण असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व र पहलकर्ताको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह ग¥यो । त्यो अवधिमा यसले मुलुकलाई कति फाइदा ग¥यो भन्न बारेमा लेखाजोखा हुन बाँकी नै होला । तर भयानक पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धका बखत नेपालीहरू युद्धमा सामेल भए पनि नेपाल देश आफैँ भने कसैको पक्ष वा विपक्षमा रहेन । त्यसैका कारण नेपाल कसैको उपनिवेश रहेन भन्ने गरिन्छ । भाडाको सिपाही सरी भारतीय र बेलायती सेनामा सहभागी भएर भारत र बेलायतका पक्षमा र अरू कुनै नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको राष्ट्रका विपक्षमा लडेको, लड्ने गरेको र आजपर्यत्न पनि त्यो स्थितिमा अन्तर नआएको तथ्यले भने बारम्बार सत्ताको बागडोर समाल्नेहरूलाई गिज्याउनुपर्ने हो । कुनै बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनर्संरचना हुँदा, सोको स्थायी सदस्यहरू थपिँदा, थपिएको सिटमा भारतले उम्मेदवारी दिँदा नेपालले भारतको पक्षमा मतदान गर्नेछ भन्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर पनि गरियो । श्रीलङ्काको विरुद्धमा राष्ट्रसङ्घमा मतदान हँुदा दक्षिण एसियाली मुलुक सबै र उत्तरी छिमेकी मुलुकले समेत विपक्षमा मतदान गर्दा सार्कमध्येकै एक मुलुक भारतले अनुपस्थिति जनायो, भारतकै पछाडि लागेर नेपाल पनि अनुपस्थित हुँदा सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष यो मुलुक नेपालको न असंलग्न र तटस्थ नीतिको बचाउ भयो न चीन र भारतका बीचमा समान सम्बन्ध कायम राख्ने नेपालको संविधानको परिकल्पना बमोजिम राष्ट्र हितका पक्षमा काम भयो । यति हँुदा पनि राजनीतिले कोल्टे फेरेको औपचारिक घोषणा छैन ।
उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकीमध्ये एकले गरेको प्रस्तावको पक्ष र अर्कोको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने र अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा एकको विरुद्ध अर्कोको पक्षमा खुलेआम लाग्ने व्यवहार नेपालको परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन त हुन्छ नै, संविधानको उल्लङ्घन हुने प्रष्ट छ । संविधानको उल्लङ्घन हुँदै जाँदा कालान्तरमा मुलुक छिमेकीको दबदबा, अनावश्यक दबाबमा पर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने कामको थालनी हुनेछ । भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरू मात्रै नभएर सार्क राष्ट्रका सदस्यहरू पनि हुन् । नेपालीहरू भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । उनीहरू पाकिस्तानका विरुद्धको लडाइमा अग्रमोर्चामा खटिने गर्छन् । भारतीय भूमिको रक्षाका लागि हरेकपटक बलिदान गर्न बाध्य छन् । अनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्ने पहिचानको के अर्थ हुन्छ ? दोक्लाम युद्धमा भारत र चीनको लडाइ जारी छ, कुनै पनि बेला त्यो भड्किन सक्ने खतरामा छ । यहाँ पनि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूलाई चीनका विरुद्ध लडाउने भारतको चाहना प्रष्ट बुझिन्छ । यतिबेला चीनले नेपाली जवान वा नेपालमाथि नै आक्रमण गरेमा नगर भन्ने नैतिक हिम्मत नेपाल सरकारले कहाँनेर बाँकी राखेको छ ? यस्तो संवेदनशील मामलामा नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व बोध गर्न पर्छ ।